Ukubona kwangaphambili: Ukuqonda kwabathengi kunye neQonga lokuGcina | Martech Zone
Ukubona kwangaphambili isungule ukuKhutshwa kweNtwasahlobo kweqonga layo loLawulo lwaBathengi, esenza ukuba kube lula ngakumbi kubathengisi ukuba bafumane ukujonga kwabathengi nge-360 ° kwaye basebenzisane nabanye ababandakanyekayo kwimpumelelo yabathengi kumbutho wonke besebenzisa amandla ohlalutyo lwedatha.
Kwiinkampani ezinkulu apho amasebe amaninzi ahlukeneyo-ukusuka kwintengiso ukuya kuphuhliso lwemveliso kunye nentengiso- abathengisi bacelwa umngeni ngamanqaku edatha ahlukeneyo malunga nomsebenzi wabathengi, kodwa kufuneka benze umgudu odibeneyo wokugcina abathengi bonwabile kwaye bezibandakanya. Nantsi indlela uGainight anceda ngayo:
Imodyuli yoLwamkelo yenza ukuba amashishini eengeniso aphindaphindiweyo alinganise ukusetyenziswa kwemveliso, ukwamkelwa kunye nempumelelo yeemetriki kunye nokusebenzisa oku ukuqhuba ukuhamba kokugcinwa kwabathengi kulo lonke ishishini.
Imodyuli yoLawulo lweeNgxelo yenza ukuba amashishini eengeniso aphindaphindiweyo ukulinganisa impilo yabathengi ngophando kunye nokuthatha inyathelo ngokusekwe kwiimpendulo zophando-ngokuthe ngqo ngaphakathi Salesforce.com.
Imodyuli yoLawulo lweNgeniso yenza ukuba amashishini eengeniso aphindaphindiweyo alinganise ngokuchanekileyo kwaye ahlalutye i-churn kwaye avavanye ifuthe layo ekukhuleni kwengeniso iyonke nakwixabiso lobomi babathengi.
Imodyuli yoLawulo lokugcina yenza ukuba amashishini eengeniso aphindaphindiweyo abeke emgangathweni kwaye enze ukuba ukuhamba komsebenzi kugcinwe kubathengi- ngokuthe ngqo ngaphakathi kwe-Salesforce.com.
Ukuqonda kwangaphambili kubonelela abaphumeleleyo kwimpumelelo yabathengi bafumana umbono opheleleyo wobomi babaxhasi, okukhokelela kwi-silos zesebe, unxibelelwano oluphindaphindiweyo kunye nonxibelelwano olusebenzayo. Amandla amashishini amatsha eGainight anceda iinkampani ukuhambisa ixabiso kwelona likhulu, uninzi lwabathengi abanobuchule. Amashishini aqhuba ukugcinwa okongezelelweyo kunye nengeniso yokukhula kunye neyona datha yangoku malunga nabathengi babo kwiminwe yabo kunye nokuhlala phambili ekuhambeni kwabaxhasi.
tags: Ulawulo lokwamkelabhalaukugcinwa kwabathengiimpumelelo yomthengiimpumelelo kumthengiulawulo lwengxeloukubona kakuhleUlawulo loKhulaUlawulo lweNgeniso yeXesha lonkeUlawulo lokugcinwaukuthengisa
Mar 24, 2014 ngo-8: 13 AM
Iingcebiso ezintle zokuthengisa! Enkosi kakhulu ngolwazi .. Ngokwenyani inomdla kwisithuba. Enkosi ngokwabelana nathi.